नर्बेमा रमाएका नेपाली | Narendra Raule
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नर्वे उपयुक्त गन्तव्य मानिन्छ । नि:शुल्क अध्ययन गर्न पाइने हुनाले नर्वे धेरैका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । नर्वेमै लामो समयदेखि प्राध्यापन पेसामा संलग्न डा. विशाल सिटौलाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्वन्द्व तथा शान्ति, हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेसन, फिसेरी, डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स, डेभलपमेन्ट स्टडिजजस्ता विषय अध्ययनका लागि नर्वे राम्रो गन्तव्य हो । नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ लाइफ साइन्सका प्रोफेसर सिटौलाका अनुसार नर्वेमा अन्य देशका विद्यार्थीहरूको तुलनामा नेपाली विद्यार्थीहरूले राम्रो गरिरहेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागका संयोजक डा. हेमराज सुवेदी आफ्ना धेरै विद्यार्थीले नर्वेमा राम्रो गरिरहेको सुनेर गर्व गर्छन् । सुवेदी भन्छन्, ‘उनीहरू ज्ञान सिकेर स्वदेश फर्किऊन्, नेपालकै लागि योगदान गरून् ।’ तिनैमध्येका एक हुन्, शान्ति तथा द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा एमफिल अध्ययनरत इटहरी, सुनसरीका केशव दाहाल । ओस्लो विश्वविद्यालयमा रिसर्च असिस्टेन्टका रूपमा कार्यरत दाहाल नर्वेको पढाइप्रति सन्तुष्ट छन् । वर्षमा आधा समय हिउँ पर्ने नर्वेमा उनले पृथक अनुभव बटुलेका छन् । दाहाल भन्छन्, ‘अनुशासित मानिसहरू, सुरक्षा एवं सफा वातावरणले लोभ्याउँछ ।’
वाणगंगा, कपिलवस्तुका सूर्य काफ्ले पिस स्टडिज विषय अध्ययनका लागि नर्वेको ट्रोम्सो सहर पुगेको २ वर्ष भयो । सुरक्षा, सहयोगीपन तथा एक–अर्कालाई गरिने विश्वास काफ्लेलाई त्यहाँका मन पर्ने पक्ष हुन् । मानव विकास सूचकांकमा एक नम्बरमा पर्ने नर्वे मानव अधिकारको अक्षरश: पालना गर्ने देश हो ।
नर्वेजियन भाषा सिक्दा अवसर पाइन्छ
म नर्वे आइपुगेको ठ्याक्कै दुई वर्ष भयो । सन् २०१३ को अगस्टमा, नर्वेको ओसस्थित नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफलाइफ साइन्स विश्वविद्यालयमा एग्रोइकोलोजी विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि म नर्वे आएको हुँ । नर्वे थोरै समयमा आर्थिक उन्नति र मानव विकासमा ठूलो फड्को मारेको देश हो । यहाँका युनिभर्सिटीहरूमा नि:शुल्क शिक्षा भएकैले मैले एग्रो–इकोलोजी भन्ने विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने निर्णय गरे ।
मेरो प्रोजेक्ट वर्क समूहमा १ जना कोलम्बियन, १ जना बेल्जियन छात्रका अतिरिक्त २ जना नर्वेजियन छात्र–छात्रा पनि भएकाले अंग्रेजी नबुझ्ने कृषकहरूसँग पनि काम गर्न सजिलो भयो । सुरुका वर्षहरूमा होटल र मलहरूमा सरसफाइको काम गरेर आफ्नो खर्च जुटाएँ । सन् २०१५ को मेदेखि आफू पढिरहेकै युनिभर्सिटीको एग्रोप्रो भन्ने रिसर्च प्रोजेक्टेमा रिसर्च टेक्निसियनका रूपमा कार्यरत छु । कृषि प्रणालीलाई कसरी वातावरणमैत्री बनाउने भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएको यो परियोजनाअन्तर्गत मेरो खोजको विषय कृषिक्षेत्रमा फोस्फरस प्रदूषणलाई कसरी कम गर्ने भन्ने छ ।
नर्वेका राम्रा पक्ष धेरै छन् । पहिलो कुरा त यहाँ बसोबास गर्ने जो–कोहीले आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्छ । सामाजिक सुरक्षाको राम्रो उदाहरण देख्न पाइन्छ । यहाँका बासिन्दालाई राज्यका निकायहरूले समान व्यवहार गर्ने र कुनै भेदभाव नराख्ने भएकाले नागरिकहरू सन्तुष्ट छन् । त्यसैले मानव विकास सूचकांकमा यो देश पहिलो स्थानमा छ ।
नर्वे उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने बिद्यार्थीहरूका लागि उत्कृष्ट रोजाइ हो । यहाँ नाफामुखी निजी शैक्षिक संस्थाहरू निकै कम भएकाले सबैजसो शैक्षिक संस्था उत्कृष्ट छन् ।
प्राय: सबै विषयमा राम्रो पठनपाठन हुने भए पनि विशेष गरी यहाँ विज्ञान तथा प्रविधि र इन्जिनियरिङजस्ता विषय अध्यापनका लागि प्रख्यात विश्वविद्यालयहरू छन् । नि:शुल्क शिक्षा भए पनि यहाँको बसाइ एकदमै महँगो छ । विद्यार्थीहरूले हप्ताको २० घण्टा काम गर्ने अनुमति पाएका हुन्छन् । काम गरेबापत प्रतिघण्टा १ सयदेखि १ सय ८० नर्वेजियन क्रोनर पाइने भएकाले आफ्नो मासिक खर्च जुटाउन धेरै काम गर्नुपर्दैन ।
प्रशान्त राउत, भक्तपुर
हाल : पेन्टागनभायन, ओस, नर्वे
नर्वेमा नेपाली मन
विगत पाँच महिनादेखि नर्वेमा अन्य धेरै देशका विद्यार्थीहरूसँग पढ्ने, सिक्ने अवसर पाइरहेको छु । विश्वविद्यालयमा नि:शुल्क पढ्न पाइनुका साथै हप्तामा दिनको दुई–तीन घण्टा काम गर्दा पनि खान, बस्न र पकेट खर्च धान्न सकिने भएकाले पनि नर्वे मेरो प्राथमिकतामा रह्यो । म अध्ययनरत एनएलए विश्वविद्यालय ओस्लोबाट करिब ३ सय ५० किलोमिटर दक्षिणमा पर्छ । महिनामा ५ दिन नियमित कक्षापछि बाँकी महिनाभर कक्षा सञ्चालन नहुने भएकाले मैले ओस्लो बस्ने निर्णय गरें । यहाँ साताभरि मरिमेटी काम गर्ने र साताको अन्त्यमा आफंैलाई बिर्सिने गरी रमाउने संस्कृति छ ।
म पूर्णकालीन विद्यार्थी हुँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययनमा स्नातकोत्तरको पढाइ पूरा हुनासाथ विश्व पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गर्न नर्वे आइयो । समय मिलाएर भिडियोग्राफी, भिडियो एडिटिङ र नर्वेजियन भाषा पनि सिक्दैछु । जीविकोपार्जनका लागि महिनाको ४० घण्टा जति हकरको काम गर्छु । त्यो सँगै ४० घण्टा जति नर्वेजियन अर्गानिक रेस्टुराँमा एसिस्टेन्ट कुकका रूपमा पनि काम गर्दैछु ।
अध्ययनका लागि नर्वे राम्रो गन्तव्य हुन सक्छ, तर पैसा कमाउँछु भनेर आइयो भयो भने आप्रवासीप्रति लचिलो नीति नहुँदा दु:ख पाइन्छ । पढाइमा भन्दा काममा बढी जोड दिने केही साथी विश्वविद्यालयबाट निष्कासनमा परेका छन् भने केही साथी असाइनमेन्ट कपि–पेस्ट गर्दासमेत निष्कासनमा परेका छन् । यतिसम्म कि आफ्नो नामको अपार्टमेन्ट अरूलाई भाडामा लगाउने, आफु कलेजको सोफामा सुत्ने, अति गरिब भनेर कलेजबाट छात्रवृत्ति लिने र चारवटा ठाउँमा काम गर्ने, ट्राभल कार्ड नै नकिनी गाडी चढ्ने र सधैं कारबाहीमा पर्ने एक जना नेपालीलाई केही दिनअघि यहााँको सरकारले देश छोड्न समयसीमा तोकिदिएको छ ।
पढाइ सकिएपछि यहीं नै काम गर्ने मनसायले आउने हो भने होटल म्यानेजमेन्ट, इन्जिनियरिङ, नर्सिङजस्ता प्राविधिक विषयहरू छानेर पढ्न आउनु उपयुक्त हुन्छ । नर्वेजियन भाषा राम्रोसँग जान्ने हो भने पढाइ सकिएपछि त्यसैसँग सम्बन्धित काम पाइन्छ । पढेर नेपाल नै फर्कन मन छ भने सोसल साइन्सका विषयहरू रोज्दा पनि राम्रै हुन्छ । यहाँको पढाइपछि तेस्रो मुलुक जाने सोच छ भने त्यो देशको माइग्रेसन प्याटर्न र बजार बुझेर विषय रोज्न सकिन्छ । आफ्नो शैक्षिक पृष्ठभूमि, मनदेखि पढ्न चाहेको विषय र आफू अबको पाँच–दस वर्षमा के बन्न चाहने भन्ने कुराले के पढ्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
अनुश खड्का, तनहुँ
हाल : ओस्लो, नर्वे
मध्यरातमा सूर्य हेर्दा
सन् २०१५ को अगस्टमा शान्ति तथा द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा एमफिल गर्न म नर्वेको ट्रोम्सो आइपुगें । यो विषय अध्ययनका लागि यही ठाउँ उपयुक्त लाग्यो । बस्नका लागि सबै सुविधा भएको र विकसित देश भएकाले मलाई पहिल्यै लोभ्याएको थियो । यहाँको शिक्षा नि:शुल्क हँुदाहुँदै मैले नर्वेजियन सरकारको छात्रवृत्ति पाएको छु । मैले थप काम गरिरहनु पर्दैन ।
नर्वेको बसाइप्रति म सन्तुष्ट छु । यहाँ ६ महिना पूरै सूर्य उदाउँछ, उज्यालो हुन्छ र ६ महिना पूरै अस्ताउँछ, अँध्यारो हुन्छ, हिउँ बर्सिन्छ । ट्रोम्सो मध्यरातमा सूर्य हेर्ने ठाउँका रूपमा प्रख्यात छ । मैले पनि त्यसको मज्जा लिएको छु । विश्वविद्यालय भने विशाल छ । असंख्य पुस्तकले भरिएको ठूलो पुस्तकालय छ । यहाँबाट युरोपका अन्य देशहरूमा सजिलै पुग्न सकिन्छ । पहिलो पटक देश छाडेर आउनेहरूलाई काम पाउन गाहै्र हुन्छ, तर साथीहरूसँग नेटवर्क भयो भने त्यति गाह्रो हँुदैन ।
नर्वेमा कमाइ पनि राम्रै हुन्छ, तर कमाउनभन्दा पढ्नका लागि राम्रो गन्तव्य हो । खासगरी यहाँका विश्वविद्यालयहरू स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङजस्ता विषयका लागि चर्चित छन् ।
कमल कँडेल, ट्रोम्सो, नर्वे
यातायातको सुविधा मन पर्‍यो
२०१३ अगस्टमा म नर्वेको ओस्लो आइपुगें । यहाँको भौतिक प्रगति पुरानो भए पनि व्यवस्थित छ । जीवन जिउन चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरूको सहजता छ । गाडी तथा ट्रेन १ मिनेटको पनि फरक नपर्ने गरी समयमा आउँछन् र समयमा पुग्छन् । गाडी तथा ट्रेन १ मिनेटको पनि फरक नपर्ने गरि समयमै आउँछन् र समयमै गन्तव्यमा पुर्‍याउँछन् । चिठी, महत्त्वपूर्ण कागजपत्र तथा पसलमा खानेकुराको नाम नर्वेजियन भाषामा हुनाले कहिलेकाहीं समस्या हुन्छ । स्नातक तहमा खासै भर्ना मिल्दैन । नर्सिङ र अन्य प्राविधिक विषयहरू पढ्यो भने यहाँ जागिर पाइने सम्भावना हुन्छ । नर्वेमा कर्मचारीतन्त्र भने सुस्त देखिन्छ । विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया र भिसाको प्रक्रिया पनि ज्यादै सुस्त छ, तर बाटो भने व्यवस्थित छ ।
विकल्प अधिकारी, सुन्दरबजार, लमजुङ
Be the first to comment on "नर्बेमा रमाएका नेपाली"